प्रदेश नं. ५ – Page2– Ganatantra Online
अपाङ्ग विद्यार्थीलाई सरकारको सुविधा : छात्रवृत्तिमै सिमित
नवीन अभिलाषी दाङ, साउन १२ । धर्नाका समिर विक कक्षा ६ मा पढ्छन् । कान नसुक्ने समिरको शिक्षाका लागि सरकारले बार्षिक ५ हजार दिन्छ । उनको ख श्रेणीको अपाङ्गता हो । मासिक पाँच सय रुपैयाले उनले शैक्षिक सामग्रीको समस्या केहि हदसम्म समाधान भएको छ । तर त्यो वर्षको एक पटक मात्र...
न्यायीक समिति आफै अप्ठेरोमा
नवीन अभिलाषी दाङ, साउन १२ । चुनौती र जोखिमको विचबाट न्याय सम्पादन गर्दै आएको स्थानीय तहका न्यायीक समितिका संयोजकहरुले बताएका छन् । जनशक्तिको अभाव र भौतिक पुर्वाधारको कमि सँगसँगै सामाजिक संरचनाका कारण कायमै रहेका चुनौतीहरु रहेको भन्दै उनीहरुले न्याय समितिमा आएका मुद्धाहरुको छिनोफानो गरेको उनिहरुले बताएका छन् । दाङका १० वटा स्थानीय...
विद्यार्थीलाई कम्प्यूटर कक्षाको प्रमाणपत्र
दाङ, साउन १२ । सनलाईट कम्प्यूटर ईन्स्टिच्यूट घोराहीले एक वर्षदेखि कम्प्युटर कक्षा लिएका विद्यार्थीहरुलाई प्रमाणपत्र वितरण गरेको छ । सनलाईट कम्प्युटर र राईट स्टेप एजुकेशन एकेडेमी कपिलबस्तुले शनिबार घोराहीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर पुराना ९० जना र नयाँ ८० जना विद्यार्थीहरुलाई प्रमाण पत्र वितरण गरेको हो । सनलाईट कम्प्यूटर ईन्स्टिच्यूट घोराहीको सञ्चालक...
बराहक्षेत्र खानेपानीको विवाद मिल्यो, तदर्थ समितिको पदभार
दाङ, साउन दीपक जीएम घोराही, साउन १२ । बराहक्षेत्र खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिको नयाँ तदर्थ समितिले पदभार ग्रहण गरेको छ । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ को कार्यालयले एक कार्यक्रम गर्दै समितिको तदर्थ समितिलाई सपथ खुवाएर पदभार ग्रहण गराएको हो । वडा अधयक्ष रविलाल घर्तिको अध्यक्षता तथा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य...
दाङ चेम्बर अफ कमर्शको पदभार ग्रहण
दीपक जीएम दाङ, साउन १२ । दाङ चेम्बर अफ कमर्शको पहिलो अधिबेशनबाट सर्वसम्मत रुपमा निर्वाचित पदाधिकारीहरुले पदभार ग्रहण गरेका छन् । शनिबार घोराहीमा कार्यक्रमको आयोजना गर्दै नयाँ समितिले सपथ ग्रहणसँगै पदभार ग्रहण गरेको हो । दाङ शाखाका संस्थापक अध्यक्ष दिपक सुबेदीको निवर्तमान कार्य समितिले नवनिर्वाचित कार्यसमितिका अध्यक्ष श्रीधर महरालाई पद...
प्रतिष्ठानको फार्मेसीमा औषधी अभाव
नवीन अभिलाषी दाङ, साउन १२ । साझा स्वास्थ्य सेवा र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बिचको सम्झौता यही गएको असार मसान्तमा सकिएको थियो । सम्झौता सकिएसँगै अस्पतालको हाता भित्र लामो समयदेखी सञ्चालनमा रहेको साझा स्वास्थ्य सेवाको औषधी बिक्रि कक्ष प्रतिष्ठानले बन्द गराएको छ । विक्रि कक्ष बन्द गरेपछि विरामीको लागि आबस्यक पर्ने केहि...